rabindra bhattrai(rabindra bhattrai) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
रविन्द्र भट्टराईको विश्लेषण-‘बुलिस बजारलाई सहज बनाउने बजेट आयो’
-रविन्द्र भट्टराई, सेयरबजार विज्ञ वियरिस ट्रेन्ड बनाएर बुलिस यात्रा सुरु गरेको सेयर बजारलाई थप सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएका छन् । संसारमा करदाता खुशी हुने दिन भनेको नै सरकारले आम्दानीमा लाग्ने करको दर घटाउँदा हो । अर्थमन्त्रीले व्यक्तिले आर्जन गर्ने पुँजिगत लाभकर घटाएका छन् । यो निकै सकारात्मक कुरा हो ।...
काठमाण्डौ । सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले बजारमा बसन्त ऋतुको सुरुवात भएको दाबी गर्दै अन्य खर्च थाँती राखेर सेयर किन्न आग्रह गरेका छन् । विगत ५ दिनदेखि सेयर बजार परिसूचक लगातार बढिरहेको छ । परिसूचकसँगै समानान्तर रुपमा कारोबार रकम पनि बढिरहेको छ । मंगलबार परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत उछाल आएको छ । बढिरहेको बजारलाई इंगित गर्दै...
बजेटले पूँजीबजारमा केही आशा, केही निराशा ! रविन्द्र भट्टराईको लेख
सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटमा पूँजी बजारका बारेमा सँधै झैँ यो बर्ष पनि केही हरफ खर्च गरिएको छ, जसमा केही आशा जगाउने कुरा छन् भने बढ्दो पुँजिगत लाभकरको दरले केही निराशा पनि थपेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पोखिएका लगानीकर्ताको मनोविज्ञान पढ्दा बजेटमा पूँजीबजार सम्बन्धी हरफले लगानीकर्तामा खासै आशा जगाए जस्तो...
‘सेयरबाट करोडपति’को तहल्का अझै उस्तै, विदेशमा उच्च माग, तेश्रो संस्करण बजारमा
काठमाण्डौ । सेयर विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईको पुस्तक ‘सेयरबाट करोडपति’को तेस्रो संस्करण बजारमा आएको छ । विमोचन भएको एक हप्तामै पहिलो पाँच हजार प्रति बिक्री भएको पुस्तकको दोस्रो सँस्करण गत असारमा बजारमा आएको थियो । गत जेठ १२ गते पहिलो संस्करण बजारमा आएको यो पुस्तक हालसम्म दशहजार प्रति विक्री भइसकेको छ । तेस्रो संस्करणमा धेरै विषय...
‘रेफ्रीले धाँदली गरेपछि सेयर बजारमा पहिरो !’
►रवीन्द्र भट्टराई सेयर बजार घटबढ हुनु यसको प्राकृतिक नियम हो । बजार बढेपछि घट्नु, घटेपछि बढ्नु यसको नियमित प्रक्रिया हो । तर, बजार हाम्रो चाहना र इच्छाअनुसार चल्दैन । बजारअनुसार लगानीकर्ताले चल्नुपर्छ । पछिल्लो एक साता बजारमा निरन्तर गिरावट आउँदा लगानीकर्तामा अलिक बढी अत्यासजस्तो देखियो । जसरी हामी दौडिन सक्छौं तर दौडिरहन सक्दैनौं...
महिना हरियो, तर पूँजीबजार किन सधैं रातो ? विश्लेषक भन्छन्–‘आत्तिनुपर्दैन यो नियमित करेक्सन हो’
काठमाण्डौ । हरियो महिना हो साउन । नेपाली महिलाहरुका लागि हरियो चुरा, पोते लगाउने मुख्य मौसम भएका कारण साउनलाई हरियो महिना मानिन्छ । यो बेला हरियो चुरापोते र कपडाको माग अत्यधिक हुन्छ र हरियोकै व्यापार चल्छ । साउन नेपाली महिलाका लागि मात्र होइन, नेपाली पूँजीबजारका लगानीकर्ताका लागि समेत हरियो महिना मानिन्छ । तर यो वर्ष हरियोमय हुनुपर्ने...
'सेयरबाट करोडपति'ले कमालै गर्यो, दोश्रो संस्करण पनि सिद्धिएपछि तेश्रो प्रकाशनको तयारी !
काठमाण्डौ । नेपाली भाषामा सेयर बजार, यसका प्राविधिक पक्ष तथा कारोबार सम्बन्धी किताब निकै कम प्रकाशन भएका छन् । सेयर बजारको किताबको कुरा गर्दा रविन्द्र भट्टराईको नाम पर्यायको रुपमा अगाडि आउँछ । उनले लेखेका दर्जन जति किताबले नेपाली लगानीकर्तालाई सेयर बजार, यसको प्राविधिक पक्ष लगायतको बिषयमा बुझ्न सजिलो बनाइदिएको छ । उनले लेखेका...